JALQABBII FI GOOLABA LEENJII FALAASAMA EDA’AMUU ADAAMAA - Kichuu
HomeNewsAfricaJALQABBII FI GOOLABA LEENJII FALAASAMA EDA’AMUU ADAAMAA
Kaayyoon falaasama Eda’amuu duudhaa fi seenaa Oromoo kan ta’e Sirna Gadaa hojii irra oolchina jechuun yeroo baayyee karaa kaadiroota ODP ololamaa tureera. Kaleessa wayita leenjiin xumuramu garuu foolin Sirna Gadaa tasumaa hinjiru. Faalaasamni eda’amuu MM Abiy Ahimed shira sirna federaalizimii sabdaneessaa ittin diiguuf, sabboonummaa Oromoo xiqqeessuudhaan injifachuuf akkasumas Itiyoophiyaawiinnetii biyyoolessummaa guddisuuf Dr Daanyaachoo Asaffaa fi Dr Birhaanuu Naggaatiin bocamee qopha’ee kan dhi’aate dha. Falaasamichis harka lafa jalaatiin olaantumma Nafxanyootaa karaa hooggantoota ODP dhiigaan saba Amaaraa ta’anii, garuu kan Afaan Oromoo dubbataniitiin hojii irra akka oolchuuf dhiibbaan taasifamaa jira.
Falasamichi osoo Koree Hojii Raawwachiistuu ODP irratti waliigalamee Koreebn Giddugaleessaa ODP fi hooggantoota naannichaa fi ummata Oromootiin irratti hinmari’atamin tuffii uummata kanaaf qabaniin marii isaanii naannoo Amaaraa wajjin xumuranii erga irratti waliigalanii booda kan Oromiyaa guyyoottan afur darban keessatti hooggantoota Aanaa, Godina, Naannoo fi Federaalaa baayyinni isaanii 2,500tti tilmaamamaniin Magaalaa Adaamaatti leenjiin kennamaa turee kaleessa Fulbana 9/2012 xumuramee jira. Leenjii geggeeffamaa ture keessatti sabboontonni akka falaasamni kun marii barbaaduu fi faayidaa Oromoo dabarsee kan kennu ta’uu isaa shakkii kaasaa turaniiru. Falaasamni Eda’amuu kun yaada sabboontota Oromoo akka argatuuf yaadamee Prezidaantiin BMNO duraanii Obbo Lammaa Magarsaa haasaa cufiinsaa akka godhan affeeramanii jiru. Isaanis dubbi ijoo armaan gadii kaasuudhan waltajjicha xumuraniru.
Falaasamni Eda’amuu karaa diinagdee, siyaasaa fi hariiroo biyya alaa fayyadamnee biyya ijaaruf yoo gargaareyyuu xiyyeeffannaan keenya faayidaa uummata keenyaati;
Oromoo fi Oromiyaa ijaarun hojii dursi kennamuufii qabu ta’uu isaa beeknee faayidaa Oromootiif haahojjennu;
Uummata keenya dhiiga isaa laatee asiin nu ga’e daggannee akkuma nutti tolee jiru uummatatti toleera jennee of gowwoomsuu hadhaabnu;
Oromoo qoqqooduu fi humna tokkummaa Oomoo cabsuu keessaa habaanu;
Siyaasa Oromoo osoo hin eda’in biyya edaana jechuun kan milkaa’u miti;
Uummati keenya qabsaa’ee imaanaa nutti kenne dagannee faayidaa dhuunfaa fi garee keenyaa irratti xiyyeeffachuu keessaa habaanu;
Hooggansi ODP dursee ofiisaatiifuu eda’amuu qaba, ergasii uummata keenyas ceesisna
(Wayita Obbo Lammaan dubbiin qabxii 7ffaa kana dubbatan maayikiin jalaa akka badu ta’e jira. Kunis akka hinwaraabamneef kan raawwatamedha. Aangawoonni garee MM Abiy Ahimed ta’an bilbila dhoksaa ta’e fudhatanii galan giddu gidduutti bilbilanii nama dubbisaa fi ergaa barreeffamaa gochaa turaniiru. Isaan kana keessaa galma keessa taa’ee adda durummaadhaan kan ergaa dabrsaa ture Abbaa Alangaa Biraanuu Tsaggaayee wayita ta’u kan inni ergaa itti ergaa ture ammoo galma walga’iitii ala kan ture Daayirekteera Odeeffannoo fi Nageenya Biyyaalessaa kan ta’e Dammallaash G/Mikaa’el tti akka ta’e baramee jira)
Filannoo dhufu irratti sagaleen uummata keenyaa akka hinbittimmoofne jarmiyaalee siyaasa Oromoo wajjin dubbachuu, mari’achuutu nurraa eegama;
Namootni Oromiyaa keessaa yeroo kam caalaa hidhamaa jiru, kun waan uummati keenya nurraa eegu miti kanaaf of ha ilaallu;
Uummata kanaaf haahojjennu, jireenya isaatti hinqoosnu, uummata kana makaraa isaa itti hindheeressinu. Uummatni keenya ODPn alatti filannoo kumaatamaa qaba waan ta’eef yoo nuuf ta’uu baate itti hadhiisnu;
Hooggantootnii naannoo fi federaalaa nama dhuunfaatiif ergamuu dhaabaa uummata Oromoof hojjedhaa jedhan.
Leenjiin Falaasamni Eda’amuu yaada ka’umsaa sabbonummaa Oromoo xiqqeessuudhaan eegale garaagarummaa yaadaa hooggantoota gidduutti dhalateen dabaalamee xumuramee jira. Hirmaattonni leenjii Eda’amuu Adaamaatti fudhataa turan marti har’a Fulbaana 10, 2012 Masaraa Minilik kan MM Abiy haaromse daawwachuuf affeerraan waan taasifameef namni marti kan garaa garaatti qabatee adda faca’eera. Haala kana wayita ilaallu mooraa ODP keessatti diigamsi waan ta’uuf deemu fakkaata. Yeroo ammaa kana ODPn harka Nafxanyoota Afaan Oromoo dubbatanii jala galee akka jiru shakkiin hinjiru. Uummata Oromoo gama lixaa fi kibba Oromiyaa jiran irrattis mootummaan gocha gara-jabinaa kan raawwataa jiru kanaafi.
Idea of one country, one language was bequeathed to us by colonialists